Ny fiafaran'ny demokrasia dia mety ho faran'ny fizahan-tany ho an'i Myanmar ihany koa
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Myanmar » Ny fiafaran'ny demokrasia dia mety ho faran'ny fizahan-tany ho an'i Myanmar ihany koa
Febroary 3, 2021
Ny fiafaran'ny demokrasia ao Myanmar mety ho faran'ny fizahan-tany? Mety ho izany ny vokatry ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila amerikana ary ny filoha amerikana Biden no tena ahiahy.
Ny demokrasia Myanmar dia tsy naharitra akory 10 taona tamin'ny fanonganan'ny miaramila ny governemanta voafidy omaly
Ny filoham-pirenena amerikana Biden sy ny sekreteram-panjakana Blinken dia manahy ny amin'ny toe-javatra sy ny fitazonana ireo mpitondra governemanta sivily
Ny State of Emergency dia iray taona dia hanome fotoana lava ny governemanta miaramila hanovana demokrasia hiverina amin'ny fitondrana jadona, ary hanimba ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany koa.
Myanmar dia eo ambany fifehezan'ny tafika taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny alatsinainy, izay nitazoman'ny miaramila Aung San Suu Kyi, mpitarika ny fahefana, ary nilaza fa vonjy maika ny herintaona. Nambaran'ny tafika fa nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny novambra lasa teo ny antoko Aung San Suu Kyi noho ny fisolokiana.
Ny zon'olombelona izao dia mety ho tantara indray ho an'ity firenena Azia atsimo atsinanana ity ary mpikambana ao amin'ny ASEAN.
Any Washington ankehitriny dia nilaza ny filoham-pirenena amerikana Biden sy ny sekretera Blinken fa manahy mafy an'i Etazonia ny fitazonana ny mpitondra fanjakana sivily ao Burmese, ao anatin'izany ny mpanolotsaim-panjakana Aung San Suu Kyi, sy ireo mpitarika fiarahamonim-pirenena.
Ny tafika Myanmar dia namorona krizy hahafahany miditra indray amin'ny maha-mpamonjy ny lalàm-panorenana sy ny firenena azy, nefa mandresy ny fahavalo politika malaza be hatrany.
Taorian'ny fandinihana ny zava-misy rehetra, ny governemanta amerikana dia nanombatombana fa ny fihetsiky ny tafika Burmese tamin'ny 1 febroary, rehefa nesorina ny filoham-pirenena voafidy araka ny tokony ho izy dia nanangana fanonganam-panjakana.
Etazonia dia hanohy hiara-miasa akaiky amin'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika manerana ny faritra sy izao tontolo izao hanohanana ny fanajana ny demokrasia sy ny lalàna misy ao Burma, ary koa hampiroborobo ny fandraisana andraikitra ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny famadihana ny tetezamita demokratika Burma.
Mbola tsy nifampidinika tamin'i Shina momba ny fanonganam-panjakana i Etazonia.
Ny fanavaozana demokratika Birmania 2011–2012 dia andiam-panovana politika, toekarena ary fitantanan-draharaha tetsy Burma izay nataon'ny governemanta tohanan'ny miaramila. Ireo fanavaozana ireo dia nahitana ny famotsorana ny mpitarika pro-demokrasia Aung San Suu Kyi tamin'ny fisamborana trano ary ny fifanakalozan-kevitra niaraka taminy, ny fananganana ny Vaomieram-pirenena miaro ny zon'olombelona, famotsoran-keloka ankapobeny misy gadra politika 200 mahery, fametrahana lalànan'ny asa vaovao mamela ny sendikan'ny mpiasa sy ny fitokonana, ny fanalefahana ny sivana an-gazety ary ny fitsipiky ny fampiharana vola.
Vokatry ny fanavaozana, nankatoavin'ny ASEAN ny tolo-kevitr'i Burma ho filoham-pirenena tamin'ny 2014. Sekreteram-panjakana amerikanina Hillary Clinton nitsidika an'i Birmania tamin'ny 1 Desambra 2011, mba hampirisihana ny fandrosoana bebe kokoa; io no fitsidihana voalohany nataon'ny sekreteram-panjakana amerikana tao anatin'ny dimampolo taona mahery. Filohan'i Etazonia Barack Obama nitsidika herintaona taty aoriana, lasa filoham-pirenena amerikana voalohany nitsidika ny firenena.
Nandray anjara ny antoko Suu Kyi, ny ligim-pirenena ho an'ny demokrasia by-fifidianana natao tamin'ny 1 aprily 2012 taorian'ny fanafoanan'ny governemanta ny lalàna izay nahatonga ny fanaovana ankivy ny NLD ny Fifidianana ankapobeny 2010. Izy no nitarika ny NLD tamin'ny fandresena tamin'ny fifidianana latsa-bato tamin'ny fihotsahan'ny tany, nahazo 41 tamin'ny 44 tamin'ireo seza nifaninana, ary i Suu Kyi dia nahazo seza nisolo tena Kawhmu Vondrom-paritany ao amin'ny trano ambany ny Parlemanta Burmese.
Fifidianana 2015 valiny nanome ny Ligim-pirenena ho an'ny demokrasia an maro an'isa tanteraka seza ao amin'ny efitranon'ny birao Burmese roa, mba hahazoana antoka fa ho tonga ny mpifaninana aminy filoha, raha mpitarika ny NLD Aung San Suu Kyi voararan'ny lalàm-panorenana tsy ho filoham-pirenena. Saingy, ny fifandonana teo amin'ny tafika Birmana sy vondrona mpikomy eo an-toerana Nitohy.
Nivory ny parlemanta vaovao tamin'ny 1 Febroary 2016 ary tamin'ny 15 martsa 2016, Htin Kyaw dia voafidy ho filoham-pirenena tsy miaramila voalohany tao amin'ny firenena hatramin'ny Fanonganam-panjakana miaramila tamin'ny 1962. Aung San Suu Kyi nandray ny andraikitra vao noforonina ny Mpanolo-tsaina amin'ny fanjakana, toerana mitovy amin'ny praiminisitra, ny 6 aprily 2016.
Ny fandresena nanakoako an'i Aung San Suu KyiNy ligim-pirenena ho an'ny demokrasia amin'ny fifidianana ankapobeny 2015 dia nanangana fanantenana ho an'ny tetezamita mahomby amin'ny Myanmar avy amin'ny fihazonana akaiky miaramila manapaka amin'ny fahalalahana rafitra demokratika. Na izany aza, korontana politika anatiny, korontana Toe-karena ary ara-poko mitohy ny fifandirana mankany amin'ny demokrasia maharary. Ny famonoana olona tamin'ny 2017 Ko Ni, mpisolovava silamo malaza ary mpikambana manan-danja ao amin'ny MyanmarNy antoko mitantana ny ligim-pirenena ho an'ny demokrasia dia hita fa kapoka mafy amin'ny malemy ao amin'ny firenena demokrasia. Very ny famonoana an'Andriamatoa Ko Ni Aung San Suu Kyi ny fomba fijeriny amin'ny maha mpanolotsaina azy, indrindra amin'ny fanavaozana MyanmarNy lalàm-panorenan'ny miaramila sy ny fampidirana ny firenena demokrasia.
OTDYKH Leisure Expo hanombohana ny fanarenana ny fizahan-tany amin'ny fanontana faha-27
Fanadihadiana momba ny mpiasa lavitra sy fikarohana momba ny Microsoft 365